History » . ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း တစ် – ပါဝါ (58)	22
Ma Ma says: စိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းသွားတာက ဒီလောက်များတဲ့ပိုစ့်တွေထဲက ပထမဦးဆုံး မဲကျလာတာ လူမျိုးရေးပိုစ့်ဖြစ်နေတာပဲ။
သုတေသနရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပိုင်ရှင်က ကိုအောင် (ခ) ကိုချို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ သဂျီးမင်းရဲ့ဆိုဒ် ချိုမြိန်စွာ ဆက်လက်အောင်မြင်မယ်လို့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: အနော်မသိတဲ့ တစ်ယောက်ပေပဲ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: 2011 ဆိုတော့ ကျနော် အားကောင်းမောင်းသန် ရွာထဲရှိနေချိ်န်
ခင်ဇော် says: ကိုအောင် ပျောက်သွားးတာ တစ်နှစ်ကျော်ပါပေါ့..
​ဒေါ် လေး says: အရင်က ကျမ ကွန်ပြူတာ စကိုင်ကာစက
koaung says: ​မလတ်​ သူကြီး ခင်​မင်​ရပါ​သော အ​ပေါင်းအ​ဖော်​များခင်​ဗျား
kai says: ဓာတ်ပုံဆရာကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့..။
koaung says: ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​သူကြီးရယ်​ နယူး​ယောက်​ကသူငယ်​ချင်းကလည်း​ပြောပါတယ်​ က​နေဒါ​ယောက်​ရင်​ကား​မောင်း၈နာရီဆို​ရောက်​ပြီ လာကြိုမယ်​​ပြောပါတယ်​ ခက်​တာကလိုချင်​တဲ့ပိတ်​ရက်​ရှည်​မရ. အမှန်​ဒီနှစ်​တလ​လောက်​ခွင့်​ယူပြီး ဂျပန်​သွားဘို့စီစဉ်​တာ ပိတ်​ရက်​၅ရက်​ထက်​မပိုရဆိုလို့ ဘယ်​ကိုမှ​ရောက်​ဖြစ်​မယ်​မထင်​ မိခင်​ကြီးမရှိ​တော့မြန်​မာပြည်​လည်းမပြန်​ချင်​ ကျ​နော်​တို့ဆီက က​နေဒါနဲ့အ​မေရိကန်​ ဆိုဗီစာမလိုဘူးလို့​ပြောတယ်​ ​ရောက်​ရင်​​တော့ လှည့်​ဝင်​မှာပါ
ကိုယ်​က​တော့ပညာရတာဘဲ​ကျေနပ်​လိုက်​ပါတယ်​ ညိမ်​ညိမ်​မ​နေတတ်​​တော့ အခုမြန်​မာစာရိုက်​လို့ရ​တော့ တရုပ်​စာကို​ရေ​နွေးပြုတ်​​သောက်​ဘို့ ကြံ​နေပါ​ကြောင်း ဘိုင်​သယ်​​ဝေး ဆမ်​​ဆောင်းနုတ်​​တွေနဲ့မြန်​မာစာရိုက်​ရတာဂွတ်​ထ. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ကျုပ်မလည်း. ဆမ်ဆောင်နှုတ်၎နဲ့ မြန်မာစာရိုက်လို့မရ.. ဖတ်လို့မရ..
Was this answer helpful?LikeDislike 963
koaung says: သမီးအငယ်ကိုတော့နုတ်၎ပေးသုံးတယ်ကျနော်ကတော့နုတ်၂နဲ့နုတ်၃ တွဲသုံးတယ် ကွာတာကနုတ်၂ကဘရိုဆာများများကြည့်လို့ရတယ် နုတ်၃ကဝမ်းဘရိုဆာဘဲသုံးလို့ရတယ် မန်းတလေးဘရိုဆာရတယ် နုတ်၎ကသမိးသုံးတာဆိုတော့ ဝလည်းမစိ. နုတ်၃တုံးကအမြစ်မဖော်ဘဲ အိုးပန်းအီးမေးနဲ့မြန်မာဖောင့်ထည့်တာ အနော်လည်းသူများလုပ်ပေးတာ. ဘိူင်သယ်ဝေး နောက်ဆိုပန်းသီးဝယ် ပန်းသီးမီနီကမြန်မာဖောင့်ဒေါင်းရုံဘဲ ဆိုင်သွားဘို့မလို. ဘလက်ကီးဆိုတာလေးဒေါင်းရုံဘဲ. ပန်းသီးကွန်ပြူတာလည်းမြန်မာဖောင့်အရမ်းအဆင်ပြေတယ်. အမေရိကန်ကမြန်မာတွေပြုစုထားတာ. ဝင်းဒိုးကျတော့. Wyzo browser ကျမှမြင်ရတယ်. ဖိုင်းယားဖောက်သုံးလည်းအဆင်မပြေ
koaung says: သူကြီးခင်​ဗျား
kai says: ကျုပ်ဆီမှာ အဲဒါမရဘူးဗျ..။
Mike says: .ဟား..ကိုအောင်ရွာဝင်ပြီးကွန်မန့်ပေးတာတွေ့ရတော့
.ကိုအောင့်အပြောအရ သမီးတွေထူးချွန်ကြတာသိရလို့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း..ကိုအောင်ရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 963
koaung says: ကိူကြီးမိုက်​ ​က​လေး​တွေကအ​မေ​ပြောတဲ့ အ​မော​ပြေဆိုတာသူတို့မျက်​နှာ​လေး​တွေပါ အရင်​ကမျက်​နှာ​ချော​ချောမြင်​ရင်​ များများကြည့်​ချင်​တဲ့စိတ်​ရှိခဲ့​ပေမဲ့ အခုတကယ်​ကြည့်​ရမြင်​ရမှာက ကျ​နော်​တို့ရဲ့ရင်​​သွေး​တွေဖြစ်​တဲ့ ကျ​နော်​တို့ရဲ့က​လေး​တွေပါ အရွယ်​ကလည်းစကား​ပြောလာ တာ​နေမှာ ကိုကြီးမိုက်​က​လေး​တွေအတွက်​လည်းဝမ်းသာဂုဏ်​ယူမိပါတယ်​ဗျာ
မြစပဲရိုး says: အသံလေး ပြန်မြင်လိုက်ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ကိုအောင်ရေ။
Courage says: ဟွာလေ… မနေ့တစ်နေ့ကမှ ရွာထဲဝင်ပြီး ငမြောက်ငခြောက်လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖို့ လေ့လာစရာ တွေတိုးတာပေါ့ ဒေါ်လေးမြ။
surmi says: သူပြန်လာရင် ကျနော့်ကို ဒန်ပေါက်ချက်ကျွေးပါတဲ့ ……
ဒန်ပေါက်သာမက ရေခဲမုန့်ပါကျွေးမယ်ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 963
koaung says: ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ် ကိုဆာမိရယ် မြန်​မာ ပြညိ​ရောကိတိုငိး အမှတ်​တရ ဖြစ်​မိတာ​တွေ​က. ​ရွှေ တိဂုံဘုရား​နေ့တိုင်းတက်​ဖြစ်​တယ်​ ဘယ်​​နေရာသွားသွား လမ်း​လျောက်​ဖြစ်​တာများတယ်​ ဒံ​ပေါက်​ထမင်း ​နေ့တိုင်းစားဖြစ်​တယ်​ (ကြက်​လျှာစွန်း​နော်​) ​ရေခဲ မုန့်​ထက်​ ဖာလူဒါစား​နေကျမို့. ဖာလူဒါဘဲစားတယ်​ ကျန်​တာက​တော့ ဒိန်​ချဉ်​ လဘက်​ရည်​ဆို ၂ခွက်​ဆက်​တိုက်​​သောက်​တယ်​ :-) :-) :-) ငတ်​တာ မြန်​မာ ပြည်​ပြန်​တိုင်း ကျ​နော်​တို့လို ​ခြေသလုံးအိမ်​တိုင်​သမား​တွေက. အမျိုး​တွေ​တောင်​မနုတ်​ဆက်​နိုင်​ဘူး တာဝန်​မ​ကျေဘူး​ပေါ့ဗျာ လိုအပ်​ရင်​အ​ဝေးက​နေ​ထောက်​ပန့်​ပါတယ်​ ​ရေစက်​ဆုံရင်​​တွေ့ကြတာ​ပေါ့ဗျာ အဝင်​အထွက်​ အတည်​တကျမရှိ အသွားအလာ ခက်​ခဲမှာမို့. ကိုယ့်​ဓာတ်​ပုံ​တောင်​ အပ်​ဒိပ်​မလုပ်​ချင်​ ​ကျေးဇူး အများကြီး တင်​ရှိပါ​ကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 963
koaung says: ဆမ်​​ဆောင်းအပလီမှာရှာလို့မရဂူဂယ်​အပလီမှာသာရပါ​ကြောင်း ကျ​နော်​လည်းဒီ​နေ့မှအားလို့စမ်းကြည့်​တာအဆငိ​ပြေသွားပါ​ကြောင်း
ဦးကြောင်ကြီး says: အူးအောင်အား ကြောင်က္ခထီးဗွဲ့ ချီးမြှင့်ပါသီ…။
koaung says: ယူ​စေဗျား တနှစ်​​ကျောင်းလခ အ​မေဂျိက​ဒေါ်လာ ၃သောင်းစားစရိတ်​မပါ ၃နှစ်​စာအရင်​​ပေး​ချေပါ :-) :-) :-)
ဦးကြောင်ကြီး says: ကြောင်က္ခထီးအူးအောင်အား ၃နှစ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဂွင့် ပြုသီ။